हीलिंग बन्डल | मद्दत | उपहार कार्डहरू - मद्दत MEHemp
सहायतामहेम्पको® हीलिंग बन्डल १ मा हाम्रो २ ओज हेम्प सीड तेल पम्प, १ औंस अर्गन ऑयल ड्रॉपर, o औंस व्हीप्ड लाइम बॉडी बटर, र o ओज म्याग्नेशियम बडी स्प्रे समावेश छ।
मद्दत MEHemp's व्हीप्ड लाइम बडी बटरले तपाईंको छालालाई एकदम कायाकल्प गराउँदछ र लाइमको साथ बनेको हुन्छ ताजाको रूपमा तपाईंलाई खानको लागि गन्ध आउँछ! लाइममा भिटामिन सी हुन्छ, एक शक्तिशाली एन्टिआक्सीडन्ट जसले छालाको दृढता र जीवनशक्तिलाई बिगार्ने हानिकारक फ्रि रेडिकलहरूसँग लड्दछ। मद्दत MEHemp's व्हीप्ड लाइम बॉडी बटर अझ बढी जादुई छ किनकि यसले समावेश गर्दछ मद्दत MEHemp's हस्ताक्षरहेम्प सीड र अर्गन तेल। स्लेथर यस विकृत रूप मा धनी र बाक्लो सबै प्राकृतिक उत्पादन र तुरुन्त आराम, ताजा र पुन: बहाल महसुस!
मद्दत MEHemp's म्याग्नेशियम बडी स्प्रे ले तपाईको दुखाई र दुखाई टाँस्न मद्दत गर्दछ! म्याग्नेशियम शरीरमा चौथो सबैभन्दा प्रचुर मात्रामा खनिज हो, यसले तपाईंको स्वास्थ्यको स्वास्थ्यको लागि यसको महत्त्वलाई जोड दिन्छ। यसको महत्त्वको बाबजुद हामी मध्ये धेरैले सिफारिश गरिएको दैनिक सेवन पूरा गर्दैनौं। लागू गर्दै मद्दत MEHemp's तपाईको छालामा म्याग्नीशियम बडी स्प्रेले तपाईलाई आफ्नो दैनिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ तंत्रिका र मांसपेशिको प्रकार्य विनियमन गरेर, भिटामिन डी मेटाबोलिजाइज गरी, र रक्तसञ्चार बढावा। किन तपाईंको अस्वस्थ खुट्टालाई ठूलो रातको निद्राको लागि शान्त पार्नुहुन्न?
म यी उत्पादनहरू २०१ 2018 देखि प्रयोग गर्दैछु र तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रेम गर्दछु हेम्प तेल एक पीडा निवारक हो र एक उत्तम मॉइस्चराइजर, तनाव रिलीभर, वास्तवमा एक बोतलमा एक चमत्कार हो, अर्गान तेल एक मोइस्चराइजरको रूपमा अद्भुत छ र यसले तपाईंको कपाल बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ, र न nailsहरू, नीबूको छाला तपाईंको छालाको लागि उत्तम हो यसले एक्स्मा र सोरायसिस, ड्राई छालासँग मद्दत गर्दछ। म सुझाव दिन्छु तिनीहरूका सबै उत्पादनहरु लाई ती सबै मन पर्छ।
मलाई सबै उत्पादनहरू मनपर्‍थ्यो! तिनीहरू अरू कुनै उत्पादनहरू जस्तो छैनन्। उत्तम उत्पादनहरू सँधै>
यो बन्डल आश्चर्यजनक छ। पुरानो पीडाको लागि म गत वर्ष मैग्नीशियम स्प्रे प्रयोग गर्दैछु र यसले केही मिनेटमा मद्दत गर्दछ। यस कम्पनीबाट प्रस्ताव गरिएको कुनै पनि उपचार उत्पादको साथ तपाईंको दुखाइ र पीडा हटाउनुहोस्। उनीहरूले तपाईको कथामा व्यक्तिगत चासो लिन्छन्, उनीहरू सुन्छन् र निर्णय गर्दैनन् जब उनीहरूको उत्पादनलाई कुन केस प्रति उत्तम हो भनेर सोधिन्छ। मैले धेरै जसो उत्पादनहरू नमूना लिएको छु र विश्वस्त छु कि मैले मेरो हेम्प आवश्यकताहरू आपूर्ति गर्न एक अद्भुत कम्पनी फेला पारेको छु। मलाई मेरो जीवनको एक अंश फिर्ता दिनका लागि धन्यबाद जुन मैले सोचे कि मैले हराएको छु।
मेरो साथी एमजेले मलाई तपाईको उत्पादन सिफारिश गर्‍यो। मैले तुरून्त आदेश दिएँ। मलाई बॉडी बटर र अर्गान तेल मन पर्छ। यसले मेरो छालामा वास्तवमै भिन्नता ल्यायो। म अर्को अर्डरमा राख्दै छु!
ओएमजी मैले किनेको हरेक उत्पादनहरू अति उत्तम छ! मैले उत्पादनहरू प्रयोग नगरेसम्म म कहिले विश्वासी भएन। पहिलो दुई उत्पादन मैले आर्गेनिक हेम्प तेल र म्याग्नेशियम स्प्रे जहाँ किनेको हो। पछि मलाई दाहिने हातमा गतिशीलता दिनुहोस्। त्यसो भए मेगा बॉडी बटर शुरू गर्नुभयो, मेरो छालाको क्यान्सर स्पटहरू, अनुहार र हतियारहरू नरम गर्नुहोस्। (नाडी गन्ध अद्भुत छ) म कपालमा यस हप्तामा अर्गनको तेल शुरू गर्दैछु। म तपाईंलाई कसरी थाहा दिन्छु। बेल काउन्टीमा जो कोही मलाई चिन्छन्, म कुनै कुरामा विश्वास गर्दिनँ जसले मलाई प्रमाणित गर्न सक्दैन। मैले भन्नु पर्छ म एक विश्वासी हुँ। र होईन मँ यो भुक्तान गर्न वा नि: शुल्क उत्पादनहरु पाइरहेको छैन। डोना
वाह! अद्भुत उत्पादनहरू र बन्डल